Fanehoana ny safidim-bahoaka amin'ny 2 septambra 2009
2009-08-31 @ 22:02 in Politika
Tsahotsaho fotsiny eto amin'ny aterineto no nandrenesako fa misy izany fanangonan'olona hanatrika ny fotoanan'ny TGV izany ao Mahamasina amin'ny alarobia 02 septambra 2009, dia hoy aho hoe raikitra amin'io fotoana io indrindra izany ny fanehoana ny safidim-bahoaka fa i Andry Rajoelina no ho filoha hitantana ny tetezamita iraisana ka tsy misy miala amin'ny toerany ny efa tafapetaka rehetra. Dia mihoraka am-pifaliana milaza izany fandresena goavana izany ny mpanohana azy. Efa nanomboka tamin'ny fitsenana ny PHAT teny Ivato saingy voahelingelin'ny zava-nitranga tamin'ny mpitarika ny delegasionan'ny mpanohana an'i Marc Ravalomanana moa io fitsenana tokony ho nakotroka io. Ary dia amin'io 02 septambra 2009 io no sady faradoboka iantsoana ny mpanohana azy haneho ny safidiny ho hivoaka ho mpandresy ay hatrany ry zareo rehefa mirava ao amin'ny kianjaben'i Mahamasina.
Na ahoana na ahoana, na tsy endrika demaokratika mihitsy aza ny fampitahana ny isan'ny olona hanatrika fivoriana ankalamanjana na eny amin'ny kianjabe, hijerena ny maro an'isa, dia tery ihany izay manana foto-kevitra hijoro amin'ireo ankolafiny "mandray anjara amin'ny fifidianana". Tsy maintsy hisy ny fanangonan'olona avy any amin'ny faritra hanabe isa ny mpiara-dia amin'ny tena. Efa nanao izany indroa miantoana ihany ny mpanohana an'i dada tamin'ny alarobia 11 febroary sy asabotsy 14 febroary saingy tsy nanakana azy velively tsy ho voaongan'ny miaramilan'ny Capsat izany. Ny Miaramila izay mbola mitana ny VETO aloha amin'ny safidim-bahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa na eo aza izany VETO ananany izany, tsy manakana ny hafa haneho ny safidiny loatra io.
Tsy misy fanentanana ity hoe mahaiza mifidy, tsy misy fandrotsaham-bato fa dia aseho amin'ny fandehanana any amin'ny fihaonana eny ankalamanjana ny safidy. Izay no tian'ny sasany hanaovana ny endri-pifidianana amin'izao fotoana koa dia aleo aseho azy ny fanehoana ny safidy e! milahatra eny amin'ny biraom-pifidianana vita ihany koa maninona raha mijoro maharitra eny amin'ny hain'andro moa, na raha mety dia mipetrapetraka? Izay tsy mandeha mamonjy eny moa dia efa manaiky izay rehetra mitranga eo no dikan'izany, sady hitako sarotra tarihina hankeny amin'ny kianjan'ny Magro rahateo ny mpandala ny ara-dalàna ka ho afaka manararaotra maneho ny hamaroany ny mpanohana ny FAT amin'izao fotoana izao.
Izaho moa na dia manohana an'i Monja Roindefo ho filohan'ny tetezamita dia eny amin'ny Magro ny fanehoako azy raha manam-potoana aho. Hay tokoa moa tsy manana anjara loatra amin'ity fanehoana ny safidim-bhoaka amin'ny alarobia ho avy io ny mpiasa amin'ny ankapobeny? Eee! raha mba hataon'ny FAT andro tsy iasana moa io andro io noho ny maha-andro fanehoana ny safidim-bahoaka azy! tsaroako ao an-tsaina indray irony famindrana ny androm-pifidianana ho andro alarobia tamin'ireny fanombohan'ny Repoblika fahatelo ireny! Tsiaro sisa izany ankehitriny fa io ataon'ny ankehitriny amin'ny fomba ankolaka io.
jentilisa, talata 01 septambra 2009 amin'ny 00:05 maraina